Mareykanka“Weli waxaan la murugooneynaa dhibaatadii uu geystay qaraxii Soobe” – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Mareykanka“Weli waxaan la murugooneynaa dhibaatadii uu geystay qaraxii Soobe”
By kullane / October 14, 2020 October 14, 2020
Safaarada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay la murugooneyso shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed oo maanta u baroordiiqaya xuska 14-kii Oktoobar 2017 oo argagaxisadu xasuuqday dad aan waxbo galabsan oo isugu jira dhammaan qeybaha bulshada.
Safaaradu waxay sheegtay in dowaladda Mareykanka la xanuunsaneyso qoysaska dadkii qaraxaasi lagu laayay isla markaana ay ku garab taagan tahay dadka iyo dowladda Soomaaliyeed dagaalka ka dhanka ah argagaxisada.
Dhammaan saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa maanta umadda Soomaaliyeed la qeybsanaya xusuusta xanuunkii 14-kii Oktoobar 2017 oo argagaxisada geysteen weerar waxuushnimo ah oo lagu sheegay mid argagaxiso Kii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhaca qaarada Afrika.
Dhul giriir sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay dalka Turkiga
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo Kormeeray fariisimada Ciidanka amniga Gaalkacyo+Sawirro
Wasiir Dubbe: Bilaawga bisha soo socota ayaa lagu dhawaaqi doonaa Guddiga doorashooyinka dalka.
Kenya:xuska Nabi Muxamad NNKH oo lagu qabtay Nairobi
Wasiirka Gaadiidka koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu soo dhoweeyay Dalka Turkiga+Sawirro
Xaflad lagu weyneynaayay nabi muxamed NNKH oo ka dhacday magaalada Cadaado.
140–muhaajirin ah oo ku dhintay biyaha badda ee Senegal